Imisa qof ayaa ku dhintay weerarada Al-Shabaab tan iyo 2010? | KEYDMEDIA ENGLISH
Imisa qof ayaa ku dhintay weerarada Al-Shabaab tan iyo 2010?
Al-Shabaab oo ku biirtay Al-Qaacida 2012 ayaa dagaal ka wada Soomaaliya iyo Geeska Afrika, iyadoo dhaawac weyn gaarsiiyay amniga gobolka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Tan iyo sanadkii 2010, waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 4,000 [Afar Kun oo Qof], oo dhimashadoosa mas'uul ka ahayd Al-Shabaab, sida ay sheegtay hay'ad dhanka arrimaha Colaadaha ka shaqeysa oo lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data Project.
Qaraxyo, dagaallo iyo dilal beegsi ah ayay dadkan ku dhinteen, iyadoo inta Al-Shabaab dishay ka badan kuwa kale ee ku baxay gacanta Ciidanka dowladda, AMISOM iyo kuwa Maamulada.
Warixiinta ayaa sheegaysa in Al-Shabaab Soomaaliya ka fulisay qaraxyo iyo weeraro horey Afrika iyo Caalamka uga dhicin wixii ka dambeeyay weerarkii daarihii mataanaha ee Mareykanka.
Qaraxyadii ugu dhimashadda badnaa ee Al-Shabaab ka fulisay Muqdisho waxaa kamid ah:
Oct 2011: Qaraxii loo adeegsadey baabuurka Xamuulka ee ka dhacay Hargaha iyo Saamaha, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof, oo ardayd deeqo Waxbarasho ka helay Turkiga u badnaa, oo Goobta Natiijada Imtixaanka ka fiirsanayay.
Oct 14. 2017: Qaraxii ugu weynaa oo Gaari Xamuul loo adeegsadey ayaa ka dhacay Isgoyska Zoobe, waxaana lagu dilay kun qof. Qaraxan wuxuu baal-madow ka galay Taariikhda dalka.
Dec 28, 2019: Qaraxii gaari gaari ee ka dhacay Isgoyska Mashquulka badan ee Ex-control Afgooye, waxaa lagu dilay in ka badan 120 qof oo shacab u badanaa, iyadoo boqolaal kale ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa lala eegtay Kolonyo Injineero Turki ah oo dhisayay wadadka Afgooye iyo Muqdisho isku xirta, oo Qatar maalgelsiay.
Dilalka shiqoolka ah ayaa sidoo kale qeyb ka ah falalka argagaxiso ee Al-Shabaab ku laysay dad badan oo Soomaali ah, oo shaqsiyaad muhiim ah ay kamid ahaayeen iyo saraakiil Ciidan.
Marka laga soo tago Soomaalida la dilay, waxay Al-Shabaab sidoo kale weeraradeeda ku nafwaayay askar badan oo kamid ahaa AMISOM, waxaana ugu badana kuwa Kenya oo weerarkii Ceel Cadde Jan 2016 looga dilay boqolaal askari hal maalin kaliya.
Al-Shabaab oo kasoo faracantay Maxkamadihii Islaamiga, oo burburay 2007, ayaa dalka ka wada dagaal ujeedkiisu yahay inay meesha ka saarto dowladda UN-ka aqoonsan yahay ee fadhisa Muqdisho iyo inay eryaan Ciidan AMISOM ee difaacaya. Waxay Kooxda dagaaladeeda ku fidisay dalalka deriska, sida Kenya iyo Uganda.
Comments Topics: al-shabaab soomaaliya
The shelling is part of an ongoing military escalation in the region near the Somali capital, Mogadishu, which had been the ground for frequent battles between Al-Shabaab and the Somali army since last year.
Somali forces foil Al-Shabaab attack on base in southern region
News 12 May 2022 10:10
Al-Shabaab steps up attacks amid a decline in army Ops
News 11 May 2022 20:19
A suicide bomber targets NISA checkpoint near Mogadishu airport
News 11 May 2022 10:41
News 16 May 2022 12:00